Ngatinyorwei kuti tipe mahara SSL sevhisi pane yako yekutambira | Linux Vakapindwa muropa
Ngatinyorwei: chengetedzo yemahara neSSL yekugamuchira kwako
Isaac | | General, Resources
Kune makambani mazhinji anopa kubata masevhisi, kune kunyange emahara masevhisi. Kune avo vasingazive, kubata kana kubata webhu ibasa rinopihwa kune vatengi kuti vave nenzvimbo yekuchengeta ruzivo rwemhando ipi neipi kuitira kuti iwanikwe pane network. Izwi iri fananidzo ne "pekugara" kureva mahotera kana nzvimbo dzinopa pekugara vanhu, chete muchiitiko ichi tiri kutaura nezve data senge mapeji ewebhu, email, mafaera, nezvimwe.
Sezvaunogona kunzwisisa, kugona kunopihwa nemasevhisi emahara hakuna kunyanya kukwirira pane zvinodiwa nevazhinji. Uye zvakare, makambani mazhinji anopa mitengo yakanaka iyo inosanganisira mamwe mamwe masevhisi izvo hazviwanikwe pane mazhinji emahara ekugamuchira maseva. Zvese zvinhu kuitira kuti uve nehunyanzvi chikuva pasina kuita chero chinhu. Asi zvakadiniko nokuchengeteka? Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuve zvine hungwaru kunyangwe nemasevhisi ekubhadhara, sezvo iri nyaya yakakosha kukosha kana tichida kuchengetedza saiti yedu uye vashandisi / vatengi kure nekurwiswa.
Mupfungwa iyi, tinogona kugara tichitarisa kana kuitisa kwacho kunosanganisira masevhisi akadai sekumisikidza chengetedzo kuburikidza neSSL (ikozvino TLS), cryptography protocol yekupa yakachengeteka kutaurirana pane network. Usati wawedzera imwe mari yekuishandisa pane yako saiti, uchienda kune wechitatu mapato kuti akupe chitupa, nerombo rakanaka iro rakavhurika uye remahara sosi chirongwa chinonzi Regai Tinyora. Iyi purojekiti yakavhurwa muna Kubvumbi 2016 yekupa mahara maX.509 zvitupa zveTLS (Yekutakura Layer Security) yekunyorera ruzivo. Iyo purojekiti inofambiswa neLinux Foundation yekupa yakavhurika, yemahara, yemahara uye otomatiki SSL zvitifiketi.
Nekusada kubhadhara kambani inozivisa, inopa zvakawanda zvinoshandiswa pasina muripo kuchengetedza yako saiti neSSL. Unogona kuishandisa zvakasununguka pakubata kana iwe uchihaya kuitisa iyo isingasanganise sevhisi iyi, kunyange paine mamwe makambani akaita seWebempresa anosanganisira Ngatinyorwei sechikamu chebasa ravo. Kana iwe uchida kuyedza ino webhu inomiririra kambani, unogona kuhaya chirongwa chekutambira navo pamwe neimwe dhisikaundi uchishandisa a Webempresa coupon, saka iwe uchazviongorora wega zvakanakira Ngatinyorwe.
NaLet's Encrypt iwe uchave nezvakawanda zvakanaka. Imwe yadzo ndiko kurerukirwa kwekumisikidza, haidi chero email yekusimbisa, haidi kuve neIP yakazvipira (sekune mamwe masevhisi masevhisi, ayo zvakare anowedzera mamwe emitengo), ine rutsigiro rwemabhurawuza makuru aripo uye inovandudzwa otomatiki. Iko kuvandudzwa hakuna mari futi uye haufanire kuita chero chinhu kunze kwekunge iwe uchida kudzosa ivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Ngatinyorwei: chengetedzo yemahara neSSL yekugamuchira kwako
Mhinduro, siya zvako
Marco Villanueva akadaro
inoita 5 makore
Yakanaka info! Ini ndakazviita kakati wandei kuGodaddy, inogamuchira LetsEncrypt zvitifiketi (kunyangwe iyo yekutengesa yakandiudza kuti hazvingadaro nekuti zvinobva ku "imwe kambani"), pane dzidziso yekuti ungazviita sei kubva ku console uye nekuwedzera faira faira nemakiyi kubva kuCPanel, yatisina ruzivo rwakawanda rweSQL. Ini ndaivimba neiyi dzidziso (https://www.linuxito.com/seguridad/616-como-obtener-un-certificado-ssl-gratis-de-let-s-encrypt) asi munhu wese anomutsvaga.
Ramba uchigovana iyi inokosha info !!
Pindura Marco Villanueva
Fedora 26 inosvika inotevera June 6
Iyi OpenMW 0.40.0, iyo Open Source Morrowind
Tora dzazvino Linux nhau muemail yako